Valverde oo ka baxay aamusnaanta isla markaana rajeeyay in Real Madrid loo caleemo saari doonaa La Liga – Gool FM
(Spain) 13 Feb 2020. Macalinka reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa ka baxay aamusnaanta wuxuuna la hadlay warbaahinta markii ugu horreysay, tan iyo markii laga ceyriyay shaqada tababarka ee kooxda Barcelona isla markaana badelkiisa la magacaabay Quique Setién bil ka hor.
Ernesto Valverde wuxuu sharraxay inuu rumeysan yahay awooda ay Barcelona u leedahay inay ku guuleysan karto horyaalka La Liga ee dalka Spain xilli ciyaareedkaan.
Balse wuxuu dhinaca kale tilmaamay inay ka adag tahay sida uu u maleeyay, marka loo eego horumarka Real Madrid tan iyo markii uu dib u soo laabtay Zinedine Zidane, gaar ahaan maadaama ay Los Blancos si xoogan diirada u saareyso hanashada horyaalka Spain.
Ernesto Valverde ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mundo Deporivo” ee wadanka Spain wuxuu ku sheegay:
“Sanadkan Real Madrid waa mid xoogan oo si xoogan diiradda u saareysa hanashada horyaalka La Liga”.
“Waa wax iska caadi ah in La Liga uu noqdo mid adag, macalinkooda wuxuu bilowgii xilli ciyaareedka sheegay in muhiimadooda ay tahay ku guuleysiga horyaalka Spain”.
Dhinaca kale tababaraha reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa xaqiijiyay inuusan daawanin kulamada Barcelona tan iyo markii laga ceyriyay tababarka kooxda, bale wuxuu tilmaamay in kulanka kaliya uu daawaday ay uu ahaa ciyaartii dhex martay Barca iyo Athletic Bilbao ee wareega afar dhamaadka Copa del Rey, kaasoo kooxda reer Catalonia loogu awood sheegtay 1-0.
“Dhamaan tababarayaasha waxay dhib ku qabaan inay daawadaan kulamada kooxahoodii hore, waxaan daawaday kulankii Copa del Rey, Barcelona muhim ayey u aheyd ciyaarta, Bilbao wey fiicnaayeen waxayna dhaliyeen gool ugu dambeyntiina wey guuleysteen, si hoose uma eegin qaab ciyaareedka, sababtoo ah waxaa wanaagsan in laga fogaado muranka.
RASMI: Ajax oo xaqiijisay in Hakim Ziyech uu u dhaqaaqi doono kooxda Chelsea xagaaga soo socda